Maitiro ekushandura yako iPhone uye yako AirPods kuva spy spy maikorofoni | IPhone nhau
Maitiro ekushandura yako iPhone uye yako AirPods kuva spy spy
Uye ndezvekuti mazuva mashoma apfuura kuti rimwe remabasa mazhinji atinawo mu iPhone neAirPods rave hutachiona hwekutendera teerera kune hurukuro pasina waya kuburikidza nemahedhifoni madiki ekambani.
Iva musori nerimwe remabasa atinowanikwa nemaAirPod asi zviri pachena kwete izvo Apple zvainofunga nazvo, shandira, shandira uye vamwe vashandisi vari kuishandisa sejeki pakati peshamwari uye kushamisika nhengo dzemhuri. Usati waona mashandisiro anoita basa iri nevashandisi vese vane iyo iPhone neAirPods, isu tinofanirwa kutaura kuti iwe une basa uye usaite chero chinhu chinopenga.
Kana iwe uine AirPods 🎧, unogona kudzvanya "Live Teerera" ku "On" uye usiye foni yako mukamuri nemumwe munhu uye iwe unzwe zvavanotaura, ndatenda later🤫 pic.twitter.com/fC6KYmqpB4
- arnold (@arnoldcrndo) January 9 we2019
Ichi ndicho chimwe chezvinhu izvi zvakagadzirirwa kuwanika kune vanhu vane kurasikirwa kwekunzwa.
Jekesa kuti basa iri riripo kubva panguva yakatangwa maAirPod uye kuti haina kugadzirirwa espionage kana chero chinhu chakadai, asi chinoshanda. Iri nderimwe remabasa ayo gonesa vanhu vane kurasikirwa kwekunzwa inzwa zvirinani munzvimbo dzine ruzha.
Teerera kune hurukuro pasina waya kuburikidza neAirPods Izvo zviri nyore sekumisikidza iyo "Live Teerera" basa ratiri kuwana pane Apple zvishandiso. Kuvhiya kwacho kwangoitwa basa iri kwakareruka sekunongedzera nemakrofoni ye iPhone yedu kumunhu waunoda kuteerera uye neAirPods pane isu tinozoiteerera pasina dambudziko. Iyo nzira yekumisikidza iyo kune avo vane iPhone uye AirPods ndeiyi:
Isu tinovhura iyo IPhone Zvirongwa
Dzvanya pa Control Center uye Gadzirisa ekudzora
Ipapo tinowedzera Kunzwa
Isu tinosiya Zvirongwa uye ndizvozvo
Iye zvino tave nenhanho yekutanga inoitwa uye isu tinongofanirwa kuisa paAirPods, kutsvedza kuitira kuti «Kunzwa» nzvimbo yekutonga ioneke uye zvakananga tarisa nepasi pe iPhone yedu takananga kuruzha rwatinoda kunzwa. Kana tikaparadzanisa iyo iPhone neAirPods edu zvakanyanya, izvi zvinogona kusashanda sezvo ichibatana kuburikidza neBluetooth.
Nzira yekushandisa iri basa ibasa remumwe nemumwe wenyu uye zviri pachena mune zvese zviitiko Actualidad iPhone haina mhosva yekushandisa zvisirizvo kwaunogona kupihwa kune chimwe chinhu chave chiripo kubvira iko kwekushandisa system kugadzirisa Nyamavhuvhu apfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekushandura yako iPhone uye yako AirPods kuva spy spy
Chinhu chikuru !! Kana iwe uchida kusora mumwe munhu kana kuziva kana musikana wako asina kutendeka, ndibate.
Pindura kuna Albin
Nzira yekuziva sei iyo bhatiri chimiro cheako maAirPods
Iyo HomePod inogara muChina Chishanu chinotevera, Ndira 18